आफ्नै कारणले ईसाईहरु संकटमा छन्, अरुको सुरक्षा हिन्दूले नै गरेका हुन् : भीम उपाध्याय – पानी पधेरो
आफ्नै कारणले ईसाईहरु संकटमा छन्, अरुको सुरक्षा हिन्दूले नै गरेका हुन् : भीम उपाध्याय
काठमाडौं : नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याले हिन्दू धर्म संकटमा नभएको र हिन्दू धर्म पद्दतीमा अनेक नयाँ पन्थहरुको विस्तार भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहेका उपाध्यायले विकसित देशहरुमा ईसाईहरु संकटमा रहेको बताएका हुन्। ‘कतिले मलाई भन्छन, हिन्दू धर्म संकटमा पर्दै गयो। मेरो भनाई फरक छ, हैन हिन्दू धर्म पद्दतीका अनेक नयाँ नयाँ पन्थहरुको विश्वमा विस्तार हुँदै छ। संकटमा त अहिले ईसाईहरु छन्। विकसित देशहरुमा त्यसको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ।’
उनले विश्वमा हिन्दूहरु सकंटमा नरहेको पनि बताए। बरु नेपालमा अरु धर्म वा पन्थहरु संकटमा पर्छनकि भनेर चिन्ता भएको उपाध्यायको भनाई छ। ‘जुन दिन हिन्दूहरुलाई दृढता साथ हिन्दू संकटमा पर्याे है भन्ने लाग्नेछ त्यसपछि महासंकटमा त अरु धर्मावलम्बीहरु फस्न सक्छन्,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘आजसम्म नेपालमा अरु धर्म र पन्थहरु पूर्ण सुरक्षीत हुनुको मूल कारण नै यहाँ हिन्दूमा हामी सुरक्षीत छौँ भन्ने लागेर नै हो।’
उनले अरुको सुरक्षा पनि हिन्दूले नै गरिदिएको बताएका छन्। उनले हिन्दू पद्दतीलाई सुरक्षीत बनाउँदा कुनै संकट नआउने भावना जगाएर आफू सुरक्षीत हुनेमा अरु धर्मावलब्धीहरु लाग्नुपर्ने पनि बताए। ‘अरुको सुरक्षा पनि हिन्दूले नै गरिदिएकाले हो। त्यसैले हिन्दू पद्दतीलाई सुरक्षीत गराएर कुनै संकट हुँदैन। भन्ने भावना जगाएर आफू सुरक्षित हुनेमा अरु धर्मावलम्बीहरु पनि लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ’ उनी भन्छन्।हिन्दू पद्दती असुरक्षित भयो भन्ेन लागेको दिन विद्यमान चट्टानी धार्मिक सहिष्णुता खल्बलिएर समाज नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने उनको भनाई छ। यही कारणले अल्पसंख्यकहरुले दुख पाउने संभावना बढ्ने उनले बताए।
‘असहिष्णू ईस्लाम र ईसाई मुलुकबाट हिन्दूहरू कसरी बढारिएका थिए त्यो गम्नुपर्छ। भारतमा किन बिजेपीको उदय भयो ? मनन गर्नुपर्छ। राममन्दिर र कास्मिरमा के भयो? कसको चाहनाले किन यस्तो भयो ? याद गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा कहिल्यै कुनै धर्मावलम्बीहरू संकटमा छैनन्, थिएनन्। तर अहिले केही तत्वहरू यसलाई खल्बलाउन लागेका पनि देखिन्छन्। ’उनले हिन्दुमाथी दमन गरे समाज प्रतिकारमा उत्रने पनि बताएका छन्। ‘कसैको खुट्टाका औलामा कसैले जानाजानै बुटले थिच्यो भने प्रतिकार हुन्छ र अनि त बहुसंख्यकले नै दमन गरिदिन्छ। विश्वमा समाजको नियम यही छ’ उनले भनेका छन्।
काठमाडौंमा ४४५ सहित देशभर १२ सय २८ जना संक्रमित थपिए